Maanso Cusub:Baybal Xoojiye Waxaa Tiriyay Wariye Cabdullaahi Soomaali.
Written by Maamul on 17 February 2013. Saxafiga Cabdullaahu Yaasiin Jaamac oo Kamid ah Wariyaasha Ka Howlgala Idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ahna Abwaan Wax Curiya ayaa Shabakadda Islaamiga SomaliMeMo24.com soo gaarsiiyay Maanso uu ku Cabirayo dareenkiisa ku aadan qaabka ay saxaafadda qaar wararka uga tebiso dalka Soomaaliya ee cadawga shisheeye kusoo duulay iyo Wariyaasha la shaqeeya cadawga.FG.Aragtida Maansada Waxaa Leh Qoraaga SomaliMeMo Wax Lug kuma lahan.
Mahad oo dhan Alle ayay u sugnaatay, Naxariis iyo Nabad gelyo Nabi Muxamed Korkiisa ha ahaato.
Maansadaan waxaa la yiraaddaa Baybal xoojjiye
sida Dhiil Haruubka laga qaaday waxa ku jira loo arko oo kale ayaa wariyahana kolkuu hadlo laga dareemayaa wixii Uurkiisa ku jira.
waxa hadalkiisa ka Muuqanaya waxa uu Neceb yahay oo in la Suuliyo uu jeclaa lahaa iyo wuxuu jeclaa lahaa in la hirgeliyo.
Dagaalka Maanta Aduunyada ka holcaya ee Gaalo iyo Muslimiin u dhaxeeya labada Safba wariyaal ayaa ku jira.
qolo Xaq ayay difaaceysaa, qolana Baadilka ayay difaaceysaa. (aanu eegno qoladii Ciribteeda dambe wanaagsanaaato, Nin baa laga hayaa in yy yiri “ha la dhowro Dhaankii maqnaa wuxuu war soo dhoobo”).
Maansadaan oo la yiraahdo Beyl Xoojjiye waxa ay ka hadlaysaa qolada Sandareerto raaca ah ee ku qanacsan dhaqaalaha yar oo Gaaladu siinayaan.
waxa ay la safteen Cadawgii Ilaahay, oo la Dagaalamaya Diinta Islaamka.
sida aan og naahay Gaalada qaar waxa yirahaadaan, Ciise ayaa Na abuuray, qaar lo’ ayay caabudaan, qaar Tintooda ayay caabudaan, qaarkood waa Mulxidiin oo waxa ay ku leeyihiin annaga ayaa iska ahaanayoo Dabaceeadda ayaa na abuurtay.
dadkeenna Muslimiinta ah waxaanu ku dheganahay in Alle Mooyee aanuu jirin Alle kale oo Xaq lagu Caabudo, Maxamedna uu yahay Rasuulkiisal (NNKH)
waxa aanu la soconaaa in Gaaldu Ilaahay cadawgiisa yihiin.
isweydii marka Nin ilaahay cadawgiisa ah oo Neceb oo dagaal kala dhaxeeyo, oo Kitaabkiisa dab ku qabtay oo ku saxarooday, sidee ayuu adiga oo leh Ilaahbaan amarkiisa u hogaansanahay kagu jeclaanayaa?
nimanka Ceynkaa ah kuwa ku safka ah ayay tixdeydu ku wajahan tahay.
waxa aan la socanaa Maanta wariyaha Soomaaliga ah ee u shaqeeya Warbaahinta Gaalada ama midda ay dhaqaalaha ku bixiso, Dagaalka ay Muslimiinta iyo Diinta Islaamka kula jiraanu in uu ka daran yahay kan Gaaladu wadaan.
Habeen dhawd markii dadku seexdeen ayaa hurdadii iga tagtay kolkaas ayaan bilaabaay gunuunac iyo Fikir badan aniga oo xasuusan kuwa aanu Magaca Saxafi isla wadano ee dhalasho ahaan aan iga fogeyn sida ay Gaalo u difaacaan Muslimiinta iyo Diinta Islaamkaan u beegsadaan.
markaas ayay Maskaxdeyda ku soo dhaceen erayo ka mid ah Tixdaaan la yiraahdo Baybal xoojjiye oo aan ku Muujinayo sida nimankaani ugu kobo beeleen dagaalka Islaamka ka dhan ah.
iyadoo qabyo ah Maansadu ayaan seexday malmihii dambe ayaanna dhameys tiray.
dadka qaar gaar ahaan kuwa warfaafinta ka shaqeeya waxaa laga yaabaa markay Maansadaan arkaan ama ay qoraalkeyga akhristaan in ay yiraahdaan Cabdulaahi Soomaali dhexdhexaad ma ahan oo waa wariye dhinac u badan.
Muslimi iyo Gaal wixi ka dhaxeeya waa Munaafiq oo labada dhinacba midba mar u sheega in uu iyaga la jiro kaasna Ilaahay igama dhigo, anigu dhexdhexaad kama ahi Xaq iyo Baadil, Xagjir Islaamku agtiisa ka weyn yahay Muslimiintana jecel Gaalada iyo wixii la socdana Neceb ayaan ahay.
Bah Makaroofan Gaalo waxa ay Carrabka ku taageeraan Gumeysstaha Dalkeena qabsaday, sida askarta Itoobiya, Burundi, Kenya waxaanay Nabad diid ku sheegaan Mujaahdiinta wadaniyiinta ah.
Meel kasta oo Gaaladu qabsadaan oo Dalkeena ka mid ah waxaa Ciidda lagu jiidaa ama lagu gubaa Raayada Towxiidka, waxaana laga taagaa Calanka Saliibiga taas ayayna ku qancsan yihiin.
intaanan Mansada idiin soo gudbin waxaan idin leeyahay kuwa aan ka hadlayow, dib u soo noqda oo Dalkiinna iyo Diintiina iyo dadkiina Gees ka difaacda.
Xaqiiqadii Aduun iyo Aakhiro waa kala badan yihiin waxa aad taageeraysaana waa cadaw Ilaahay, Allena waa kuu jeedaa ee sidii adigoo arkaya uga baq oo ka fogoow Cadawga Ilaahay ee aad barbar joogto.
Boosa neer kudhacayoo, bullaacado dhexdoodiyo,
Buuq iyo sawaxan iyo Bulaan daran abuuroo,
wixi lagu bogsoon iyo Baxnaanada ka doodoo,
ka baraa'a qaadoo,
Bashar hoogay baa tahay, Dalkiis bi’iye baa tahay, Wax baqtiyay ayaa tahay, Buun shisheeye baa tahay, Xumaan Baahiyaad tahay, Biidhe qaata baa tahay, Badaw liitabaa tahay, Boqno gooye baa tahay, Biinso iyo Gerweyn iyo, Burris Cadaw ayaa tahay Asc wr wb! Allaaaaaaaaahu Akbar. MaashaaALLAAH! Ilaahay ha xifdiyo abwaanada iyo saxafiyiinta Muslimiinta. Runtii wuxuu qeexay oo si cad u tilmaamay waxay ay saxafiyiinta gumaystuhu yihiin.	February 17, 2013
masha'allaah kheyr allaha siiyo abwaanka wariyaha si xikmadeysan ayuu uga hadlay xaqiiqda saxaafadda muqdisho	February 17, 2013
waa mahadsanayahay abwaan c.llaahi soomaali	February 17, 2013
maansadaan la wareeraye, ma bashiir salaad bay ku socotaa mise eratariga ina idriis?	February 17, 2013
xuseen geedoow said:
fadlan walaal maansado cod hanooga dhigo si ay dhaxal gal dadka ay dhageystaan u noqoto maadaama dadka intiisa badan ay dhageysiga ku fiicanyihiin February 17, 2013
Allaahu akbar, allahu akbar	February 18, 2013